သေးငယ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နှစ်ချက် ခေတ္တ Pneumatic Actuator > သေးငယ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
drive ကိုရိုးတံများအတွက်သင့်လျော်သောကွဲပြားခြားနားသော Square ကိုလျှော့ချ
AOX-P ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရှိသမျှတို့သည်စွဲစေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဖြစ်သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။
AOX-P ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ၏ပိုတငျးထုတ်ကုန်များ၏ Interchange နှင့်ဘက်စုံသုံးအာမခံဖို့ ISO5211, DIN3337 (F03-F25) ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအညီတည်ဆောက်နေကြသည်။
4. ဘက်စုံသုံးအနေအထားအမြင်အာရုံအနေအထားအရိပ်အယောင်ဘို့ညွှန်ပြချက်များနှင့်လူကြိုက်များအာရုံခံကိရိယာ mount ဖို့တိုက်ရိုက်, လွယ်ကူသော, ချွေတာလမ်း။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို AOX-P ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator စက်ရုံမထွက်ခွာမီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
2. ကျနော်တို့ပြည်နယ် R & D ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစင်တာရှိသည်, အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်နှင့် AOX-P ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပြီးဆုံးနိုင်ပါတယ်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-P ကို၏နမူနာရဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ စီးရီးသေးငယ်တဲ့နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator?
A: နမူနာ 3-5 ရက်အတွင်းဖြန့်ဝေဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် နမူနာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိုကဲ့သို့သော DHL, UPS, TNT, FedEx နှင့်အမျှဖော်ပြ va လှေတျတျောမူပါလိမ့်မည် 3-5 ရက်အတွင်းရောက်ရှိပါလိမ့်မည်။
Q: AOX-P ကိုအမိန့်ပေးနိုငျမညျမြှ စီးရီးဆိုခြင်းမရှိဘဲအသေးစားနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator သွင်းကုန်များ၏အသိအမှတ်ပြု?
မေး: နိုင်သလား ငါတကယ်သင့်ရဲ့ actuator သည်မည်မျှမဟုတ်ကျင့်သောကြောင့်ငါအမိန့်တော်ရှေ့မှာနမူနာ get အရည်အသွေး?
ဖြေ၏ သင်တန်း! ငါတို့သည်လည်းနမူနာအလို့ငှာယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
hot Tags:: သေးငယ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်